मलेसियामा गएको ३ महिनामा मृत्यु - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
मलेसियामा गएको ३ महिनामा मृत्यु
Published On : ८ बैशाख २०७५, शनिबार १९:५६
बेशीशहर । दूधपोखरी गाउँपालिका १–दूधपोखरीको डाँडागाउँका २१ वर्षीय कुमार गुरुङको मलेसियामा मृत्यु भएको छ । उनी राजधानी क्वालालाम्पुरस्थित मिसन फुड कम्पनीमा काम गर्थे ।
रोजगारीको लागि घरबाट मलेसिया गएको ३ महिनामै उनको मृत्यु भएको हो । शुक्रबार बिहान मृत्यु भएको पारिवारिक स्रोतले बताएको छ । पारिवारिक स्रोतका अनुसार उनी गत माघ ११ गतेमात्रै काठमाडौंबाट मलेसिया गएका थिए ।
दूधपोखरीस्थित बाघभैरव प्राविका शिक्षक इमानसिंह गुरुङका अनुसार उक्त घटना शुक्रबार साँझ मात्रै थाहा भएको र शनिबार बिहान मात्रै परिवारलाई भनिएको थियो । उनका अनुसार कुमारसँगै ६ जना नेपाली कामदार बस्थे ।
उनीहरुले बताएअनुसार बिहान ड्युटीमा सँगै गएको र सञ्चो नभएको भनी कुमार बीचबाटोबाटै कोठामा फर्केका थिए । दिउँसो खाना खान आउने समयमा कुमार शौचालयमा मृत अवस्थामा भेटिएको उनीसँगै बसेका नेपाली कामदारले बताएको शिक्षक गुरुङले बताए ।
कमाउन विदेश गएका छोराको निधनपछि उनका बुवाआमासँगै स्थानीय शोकमा डुबेको स्थानीय कुमारी गुरुङले बताइन् ।